I-China i-35cm yokuphinda isetyenziswe kwakhona i-bong ukwenziwa kunye neFektri | UKUQINISEKISA
Uyilo oluhle lweglasi luyinto enomdla kwimbonakalo njengoko kunjalo kwi-hits. Le hitter inzima inesentimitha ezingama-19 inezinto zokuphinda zisebenze kwakhona okanye iityhubhu ezinyanzela umsi ukuba wahlukane emva koko ujike ube yindawo enye ngaphambi kokuba uthathe inhalethi yakho ngomlomo othe ngqo ekupheleni kwentamo ethe nkqo. Ingalo yebhola yombane inombhobho we-perc kwigumbi eliphambili eligqabhukayo kwaye licoca umsi ukuze uwugudise.
Nje ukuba upakishe isitya se-14mm sabasetyhini kunye neherb yakho, yitshise ngomlilo kwaye ubambe, uya kuthanda ukubukela i-perc ibeke umboniso njengoko umsi unyukela kwigumbi lesibini kwaye uqhubeka ngokusebenzisa iitonela zokurisayikilisha. Kuba le rig ixhaswa sisiseko esibanzi esingqindilili, ayizukugungqa kwaye incamke ngaphezulu xa uyibeka endaweni ethe tyaba ukupakisha isitya.
Olu luhlobo lwe-bong awunakukhathazeka ngokuqhekeka ngenxa yelitye eliqinileyo lokwakha iglasi. Yonke into malunga nesi siqwenga iyaphawuleka ukusuka kumakhonkco okuhombisa ajikeleze isiseko esijijekileyo esigobileyo ukuya kumbala wokutsala amehlo onika iso ukubonwa kwesigidi seedola.
Kufuneka ndenze ntoni xa ndifumana iimpahla kwaye ndifumanisa ukuba kukho iimveliso ezineziphene okanye ezonakeleyo?
Iimveliso zethu zipakishwe kwiingxowa ezintathu zeblue okanye kwiipakethe zebhokisi nganye, kwaye ibhetshi nganye yeempahla ihanjiswa kusetyenziswa iipelethi zeplastiki ukuqinisekisa ukuba akuyi kubakho zithuthi zenzuzo:
Emva kokuba ujonge ukuba zingaphi iimveliso ezonakalisiweyo, sixelele ngemifanekiso okanye iividiyo, kwaye siza kuphinda sivelise iimveliso ezonakalisiweyo.
Emva kokujonga ukuba zingaphi iimveliso ezonakeleyo, sixelele ngemifanekiso okanye iividiyo, kwaye ixabiso elipheleleyo leemveliso ezonakeleyo liya kuncitshiswa kwi-odolo yakho elandelayo.
Emva kokubala inani leemveliso ezonakalisiweyo, siya kukubuyisela intlawulo ehambelana ngqo.
Egqithileyo I-35cm yeglasi yokurisayikilisha yeglasi
Okulandelayo: Isitayile esitsha sokuTshaya isikhonkwane esingamakishiyo isiXhobo seQuartz Izixhobo zokuTshaya 10mm / 14mm / 18mm / 20mm Banger